Farqiga Tacliinta Ardeyda oo Ballaartay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Farqiga Tacliinta Ardeyda oo Ballaartay
La cusbooneeyay torsdag 3 maj 2012 kl 16.50
La daabacay torsdag 3 maj 2012 kl 14.08
Farqiga tacliinta dhallaanka oo sii ballaaranaya
Waxaa aad kor ugu sii kacaya farqiga u dhaxeeya natiijada iskuullada heerka sare ku sugan iyo kuwa liita, sida ku cad war-bixin uu soo saaray ururka fikirka xoogsatada. Hase yeeshee si caqabadda looga gudbo ayaan loo baahnayn in la eego oo keliya habka tacliinta fasallada oo keliya ee sidoo kale loo baahan yahay sidii wax looga qaban lahaa bayada iskuullada ku waageersan, sida ay sheegtay Anne-Marie Lindgren ee soo diyaarisay war-bixintan.
- Iskuullada ey ardeyda dhigataa ku guuleeysato natiijada sare ayaa ku yaala xaafadaha ey ku dhaqan yihiin bulshada xooggan. Middaasina loola jeedo xaafadaha ey ku dhaqan yihiin dad badan ee leh tacliin iyo mushaarooyin sare, islamarkaana ey shaqa-la’aantu ku yar tahay. Halka iskuullada kale ey dhacaan xaafadaha ey shaqa-la’aanta, tacliin iyo caafimaad-darraduba ku badan yihiin. Gunaanadkaygu wuxuu yahay in aan wax looga qaban karin is-bedel lagu sameeyo oo keliya habka tacliinta ee fasallada, hase yeeshee loo baahan yahay sidoo kale in si dhinac socota looga shaqeeyo nawaaxiyada ey dhacaan iskuulladaasi.
War-bixintan ayay Anne-Marie Lindgren ku eegtay iskuullo ku yaala magaalooyinka Istockholm iyo Göteborg, iyadoona iksu barbar-dhigtay iskuullada shahaadooyinka sare ey ardeyda dhigataa ku guuleeysteen iyo kuwa shahaadooyinka ugu liita ku hantiyay. Tusaale ahaan magaalada Götebrog ayey iskuullada qaarkood ku guuleeysteen ardeyda dhigataa 40% iney goolkii tacliineed gaaraan, halka siddeedda iskuul ee ugu wanaagsanina ku guuleeysteen ardeyda dhigataa 87% dhammaan maadooyinkii looga baahnaa. War-bixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in farqiga iskuulladu uu sii ballaartay.
Iyadoona fikirka ay soo jeedisay sidii middaa wax looga qaban lahaa yahay in indhaha la saaro sidii wax looga qaban lahaa xaaladda bayadda iskuullada liitaa ey ku yaalaan:
- Hor-u-marka korriimmo ee dhallaanka ayaan ku xirnayn oo keliya tacliinta iskuullada lagu bixiyo ee sidoo kale ku xiran bayadda ku hareereeysan iyo waxyaabaha ey kala kulmaan ee la xiriira tusaale ahaan dhaqanka, madxafyada buugagta, howlaha xiisaha leh ee la qabto, aaladda kombiyuuterka iyo wixii la mid ah.
War-bixintan oo lagu soo ban-dhigay daarta ABF ee magaalada Istockholm ayuu Magnus Nilsson oo xubin ka ah xisbiga Sooshiyaaldimoqoraadigu ka qayb galay si uu xogaal uga helo, isagoona sheegay inuu ku raacsan yahay Anne-Marie Lindgren sababta bayadda dhallaanka ku hareereeysan, hase yeeshee shaki ka muujiyay in middaa un ay ku xiran tahay sidii kor loogu soo qaadi lahaa tacliinta dhallaanka ku guul-darreeysta tacliinta:
- Dhibaatooyinka la soo gudboonaada iskuulladaa ayey sabab u yihiin waalidiinta oo aan shaqeyn ama aan lahayn tacliin ku filan. Haddiise caqabadahaa la soo ban-dhigo, waa kuwo xalkoodu qaadanayo muddo dheer. Waxaan ula jeedaa in aan iskuullada sidaa lagu dhaafi karin inta wax laga qabanayo beeyada ku heegaarsan ama dhallaanku ku sugan yihiin.
Halka ay Anne-Marie Lindgren, sida ay sheegtay ula jeeddo in aanay macnaha war-bixintu ahayn in faraha laga laabto sidii dhallaanka looga taageeri lahaa kor u qaadidda tacliintooda inta bayadooda wax laga qabanayo. Waa laba arrimmood oo is kaabaya:
- Waxaa sidoo kale loo baahan yahay in kor loo soo qaado middan kale ee la xiriirta bayada. Waana mid aan carrabka ku adkeeynayo maadaama aan hore si baaxad leh looga munaaqashoon arrinkan.